डुबेर मरेको ३ बर्ष पछी फेरी जन्मिए दिलिप ! यसरी खुल्यो रहश्य - Yatra Daily
Home विचित्र संसार डुबेर मरेको ३ बर्ष पछी फेरी जन्मिए दिलिप ! यसरी खुल्यो रहश्य
डुबेर मरेको ३ बर्ष पछी फेरी जन्मिए दिलिप ! यसरी खुल्यो रहश्य
एजेन्सीको सहयोगमा | घटना छिमेकी मुलुक भारतको हो । उत्तर प्रदेशको लखीमपुर स्थित मक्कागन्ज गाउँमा एउटा अचम्मको घटना घटेको छ जुन घटनाले अचम्मित नबन्ने मानिस सायदै कम होलान् । त्यहाँ १५ अगस्ट २०१५ मा जन्मिएको एक ३ बर्षको बालकले आफ्नो पुनर्जन्मको कहानी सुनाउन थाल्यो (बालकको नाम जितन हो)।
उसको कुरा सुनेर उसको परिवार तथा गाउँका मानिसहरु निकै अचम्मित भएका छन् । उक्त बच्चा १५ अगस्ट २०१७ मा जब २ बर्ष पुरा भएर ३ लाग्यो तब उसले बोल्न सुरु गरेको थियो । तब बिस्तारै उसले आफ्नै घरलाई आफ्नो नभनी भोलापुरको नाम लिन थाल्यो । कुरा त्यति मात्र भएन उसलाई जन्म दिने आमा बुबालाई समेत उसले आमा बुबा भनेन । त्यसो त रक्षाबन्धनको दिन उसले आफ्नै बहिनीलाई समेत ‘राखी’ बाध्न दिएन, उसले भने ‘मेरो बहिनी भोलापुरमा छ ।’
भर्खरै बोल्न थालेको बच्चाले आफ्नो घरलाई घर नभनेर अहिलेसम्म उसले नदेखेको ठाउँलाई आफ्नो घर भएको बताएपछी उसको परिवार अचम्मित भयो । उसले जहिलेपनि आफ्नो घर भोलापुर भएको बताएपछी त्यसको सत्यता बुझ्न उसको आमा-बुबाले उसले बताए बमोजिमको ठाउँमा लगिदिए । जुन पत्याउनै पर्ने सत्यता बन्यो किनकी उसले बताए अनुसार भोलापुरमा एक बिदेशीको छोरा ३० बर्षको उमेरमा मृत्यु भएको र उसकै पुनर्जन्म भएको भन्ने कुरा पत्याउनुपर्ने आधार बन्यो । भोलापुर पुगेका ति तीन बर्षीय बालकले पूर्व जन्मको कुरा मात्र भनेनन् त्यस गाउँका सबै मान्छेलाई पहिचान समेत गरिदियो ।
भोलापुरको एक विदेशीको घरमा पुग्नासाथ उसले कराएर भन्यो- ”यही मेरो बुबा हो ।” उसले विदेशीको श्रीमतीलाई समेत आफ्नो आमा भन्दै अंगाल्न पुग्यो । तीन बर्षको बच्चा आफ्नै आमा-बुबालाई आफ्नो नमानी अर्कैलाई आमाबुबा मानेर झुम्मिएपछी दुवै परिवार मात्र नभई घाटनालाई नजिकबाट हेर्ने गाउँलेहरु समेत चकित भए । त्यसमा पनि चिन्दै नचिनेको गाउँको मान्छेहरुको बारेमा उसले सोध-खोज गर्न थाल्यो । वास्तविकता बुझ्न बिदेशीको श्रीमतीले उसलाई (माइती) मामाघर लिएर गइन् । त्यहाँपनि बालकले हजुरआमा, मामा र सबै परिवारलाई सजिलै चिन्यो र उनीहरुको नामनै बताईदियो ।
भोलापुर पुगेको उक्त बच्चालाई त्यहाँबाट फर्काउन उसको वास्तविक बुबा-आमाले कोशिस गरे तर बच्चा भने फर्किन मानेन । जितन नाम राखिएको बालक आफ्नो नाम दिलिप भएको बताउँछन् ।
पुनर्जन्मको रहश्य यस्तो
भोलापुर जहाँ उक्त बच्चाले आफ्नो घर बताउँछ, त्यस गाउँका विदेशीले बताए अनुसार उसको छोरा दिलीप ठेकेदारीमा काम गर्न ब्यांग्लोर गएको थियो । तर १७ मे २०१२ को दिन समुन्द्रमा नुहाउने क्रममा उसको डुबेर मृत्यु भएको थियो । त्यतिबेला बिदेशीको छोराको उमेर ३० बर्षको थियो । घरबाट धेरै टाढा मृत्यु भएकाले उसको शव घर नल्याई उतै अन्तिम संस्कार गरिएको थियो ।
Previous articleट्रम्प अन्तराष्ट्रिय राजनीतिका नयाँ दुष्ट : इरानी राष्ट्रपति
Next article‘सेक्स डल’ बन्यो, रिसाउँदा गीत गाउँदै हँसाउने र फकाउने
पूर्व सांसद अनिल रुंगटाका मामाका छोराहरु भारतीय नागरिक भएको पुष्टि
रियल सेक्स सीन राखिएका पाँच फिल्म